Waxaad dalban kartaa buugaaga macmacaanka ah ee macmacaanka bilaashka ah - Dib u soo celinta fayadhowrka
Home » Book » Waxaad dalban kartaa buugaaga macmacaanka ah ee macmilka ah ee Keto
Maxaad samaynaysaa markaad isku dayeyso inaad raacdo qorshe cunto keto laakiin aad jeceshahay macmacaanka? Dadka intooda ugu badan, waxay ku adkaadaan inay helaan macmacaanka ku haboon cuntooyinka ketogenic. Waxaad u baahan tahay inaad leedahay xirfad cunto karis ah si aad u diyaariso macmacaanka macmacaanka leh adigoon isticmaalin maaddooyinka aan la oggoleyn ama aad u baahan tahay cuntada keto ku salaysan ee raashinka. Midkood midkoodna, samaynta macmacaanka la aqbalo ee keto waa ay adkaan doontaa in la sameeyo. Soo bandhigida Cuntooyinka Keto!
Haddii aad raadineysay raashin tufaax ah oo aad u fiican, waxaan kuu haynaa war wanaagsan. Saaxiibkeena Kelsey Ale ayaa soo bandhigeysa buugeeda cusub ee macmacaanka cusub ee Keto Sweet Meat Recesses ee BILAASH ah oo loogu talagalay dadka 500 ee ugu horreeya. Buug-gacmeedka Keto Nacnuusku wuxuu ka kooban yahay cuntada nafaqada leh ee ketogenic ku salaysan ee dhadhanka cajiib ah.
Maqaarka Keto Nacnuuska ah waxaad ka helaysaa cuntooyinka macmacaanka ah ee 80 ku jira oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo macmacaan ah sida qaniinyada yicibta brownie, qaniinyada qamriga, , ciidda pecan, jilicsanka shukulaatada, iyo kuwo kale.
Riix Halkan si aad u qabato nuqul ka mid ah buugta macmacaanka ah ee macmacaanka keto kaaga naftaada maanta oo bilaash ah! Waa inaad bixisaa maraakiibta.
Sidoo kale waxaa ku jira amarkaaga 3 hadiyado lacag la'aan ah. Waxaad heleysaa Qorshaha Cuntada ee 7 Day ee Keto, Liiska Kalluunka Dukaanka ee Keto iyo Tilmaamaha Maaddooyinka, iyo Tilmaanta Keto
The Macmacaanka Keto Cuntada waa 100% free. Dhammaan wixii lagaa codsaday waa inaad bixisid lacag yar si aad u daboosho maraakiibta iyo qabashada iyo kooxda Keto Cannabada Cookbook waxay daryeeli doonaan intiisa kale. Riix Halkan si aad u hesho buugaaga macmacaanka ah ee Keto
January 21, 2019 Jimicsiga Book, Freebies, Keto No Comment